Wararka - SABABTA FALANQAYNTA SIIBIDDA FARSAMADA FARSAMADA DHEXE
Xiritaanka bamka Centrifugal badanaa waxaa sababa cillad bixinta shaabadda farsamada. Ka gaabinta waxqabadka inta badan baxsiga, sababaha soo baxsiga soo socda:
Ring qulqulka muuqaalka durugsan ee giraanta ee daadashada dusha, sababaha ugu waaweyn ayaa ah: dhamaadka flatness flatness, qallooca ma uusan buuxinin shuruudaha, ama xagashada dusha sare; inta udhaxeysa dhamaadka sheyga, oo keenaya labada daraf isku mid ma wada ordi karaan; rakibistu meesha kuma jirto, wadada sax ma ahan.
Ring bixitaanka xirashada giraanta magdhowga, sababaha ugu waaweyn waa: cillad qanjidhada, preload isku mid ma aha; rakibaadda ma aha sax; tayada shaabadda ma gaarsiisan tahay heerka; xulashada shaambadu waa khalad
Isticmaalka dhabta ah ee natiijooyinka waxay muujinayaan in qaybaha ugu fashilmay ee qeybta wax xirantu ay dhaqaaqayaan isla markaana giraanta ma guurtada ah ee dhamaadka, shaabadaynta mashiinka mashiinka dhexe, giraanta istaaga ee dildilaaca ayaa ah dhacdo caadi ah oo fashilaad ah, sababaha ugu waaweynna waa: farqiga ayaa aad u weyn, Dareeraha raaci waa goor dambe si uu u qaado kuleylka ay keeneen lamaanaha isku dhaca; dareeraha dareerayaa wuxuu ka daadanayaa farqiga dusha sare ee dahaadhka, taas oo keenaysa wajiga ugu dambeeya inuu kululaado oo waxyeelo gaadho
Expansion Ballaarinta uumiga warbaahinta dareeraha ah, si labaduba ugu dhamaadaan uumiga quwadda balaarinta oo lakala saaro, marka labada dusha sare ee qufulka ay qasab noqoto, waxay dhaawaceysaa filimka saliidaya sidaasna waxay ku sabeysaa dusha sare ee dusha sare.
L Shubista warbaahinta dareeraha ah ee liidata, oo ay weheliso culeyska hawlgalka ee culeyska, laba wareeg oo raadinta dusha sare leh oo isku xiran lama qabsan karo. Tusaale ahaan, xawaaraha sare ee bamka xawaaraha waa 20445r / min, dhexroorka dhejiska dusha sare ee dusha sare waa 7cm, xawaaraha mashiinka ka dib xawaaraha xariiqa ilaa 75m / s, marka uu jiro xiritaanka dusha sare ee dabagalka lama socon karo wareegga, heerkulka sare ee degdega ah ayaa sababay adoo xiraya waxyeelada dusha.
Waqtiga boostada: Abriil-13-2020